भर्खरै विमान दुर्घटना हुँदा दर्जनौ सबै यात्रुको भयो मृ,त्यु र घाइते पनि यति! – Dainik Sangalo
भर्खरै विमान दुर्घटना हुँदा दर्जनौ सबै यात्रुको भयो मृ,त्यु र घाइते पनि यति!
प्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक ०८, २०७८ समय: ९:५५:५७
भर्खरै विमान दुर्घ, टना हुँदा दर्जनौ सबै यात्रुको भयो मृ, त्यु र घा, इते पनि यति!विमान दु’ र्घट, नामा द’ र्जनौको मृ’ त्यु भएको छ कृपया मानबता छ भने देख्ने बित्तिकै माथी जन्चेतनाको लागि सक्दो सेयर गरिदिनुहोला देखेर पनि नदेखे जस्तो नगरिदिनुहोला
एयर इण्डियाको बोइङ ७०७ विमानले मुम्बईबाट न्यूयोर्कका लागि उडान भरेको थियो । तर यो अमेरिका पुग्न सकेन । यूरोपको आलप्स माउण्टेन रेन्जमा नै यो दु’ र्घ’ट’ ना भयो । दु’ र्घ’ ट’ ना’मा ११७ जनाको नि’ धन
त्यसयता व्यक्तिगत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली कामदार सिंगापुर गए पनि संस्थागत रुपमा बन्दजस्तै भएको थियो। सिंगापुर नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य भएपनि माग आउन नसक्दा त्यसको फाइदा नेपालले लिन सकेको छैन। व्यक्तिगत रुपमा भने चालु आर्थिक वर्षभित्रै ४८ नेपाली रोजगारीका लागि सिंगापुर पुगेका छन्। यसवर्ष सिंगापुर जानेमा ३ महिला र ४५ पुरुष छन्।
यसपटक हाउसकिपिङका लागि दुईसय नेपालीको माग आएको हो। सिंगापुर जाने श्रमिकसँग अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क लिन पाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ।
Last Updated on: October 25th, 2021 at 9:55 am